भारतीय मिडियाले स्विकार्यो नेपालको नयाँ नक्सा,अ,*चम्मै… कसरि सम्भव ? (जानकारीका लागि धेरै सेयर गराै) – Onlines Time
February 9, 2021 February 14, 2021 onlinestimeLeaveaComment on भारतीय मिडियाले स्विकार्यो नेपालको नयाँ नक्सा,अ,*चम्मै… कसरि सम्भव ? (जानकारीका लागि धेरै सेयर गराै)
भारतीय मिडियाले स्विकार्यो नेपालको नयाँ नक्सा,अ,*चम्मै… कसरि सम्भव ? Nepal new coat of arms,Kalapani
सुरजले रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने योजना बनाए। उनले पासपोर्ट एजेन्टलाई दिए। पासपोर्टमा भिसा लाग्यो। साउदी जाने दिन पनि जुर्‍यो। तर, एजेन्टलाई दिने रकम जुटेन। उनकी सासू सञ्जिला मण्डलले ज्वाईंको दुःख देख्न सकिनन्। महोत्तरी भंगहा–५ सिद्धपुरकी उनी गाउँकै महाजन अनुरुद साहको घरमा पुगिन्। सँगै गए उनका पति जैयनाथ मण्डल।
अनुरुदलाई ५० हजार कर्जा मिलाइदिन सञ्जिलाले बिन्ती गरिन्। ‘हजुर ! मेरो ज्वार्इं विदेश जाँदै छ। हातमा उड्ने रुपैयाँ भएन’, उनले दुवै हात जोड्दै जसरी पनि रकम मिलाइदिनु पर्‍यो भनिन्। मागेको कर्जा अनुरुदले दिए। तर सर्त राखे, सयकडा ३ रुपैयाँ ब्याज तिनुपर्ने। साउन १५ गते पति जैयनाथ मण्डलको नाममा कपाली तमसुक लेखेर सञ्जिलालाई ऋण दिए।
उनका ज्वाइँ सुरज कोरोना कहरबीच भदौमा साउदी उडे। ४ महिनापछि ऋण तिर्न ७० हजार पठाए। रकम लिएर सञ्जिला अनुरुदको घर गइन्। तिर्नुपर्ने १२ लाख १८ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ भइसकेछ। यस्तो सुनेर उनी चकित परिन्। हिसाब बुझाउँदै अनुरुदले ९ लाख ९० हजार साँवा र २ लाख २८ हजार २ सय ५० रुपैयाँ ब्याज भनेपछि उनको होसहवासै उड्यो ‘मैले ५० हजार मात्रै ऋण लिएको थिएँ। कसरी भयो १२ लाख ?’ सञ्जिलाले जान्न चाहिन्। उनलाई जवाफ दिनुको सट्टा घरबाट निस्किहाल नत्र लात हान्छु भन्दै अनुरुदले धम्काए र जलेश्वर अदालतमा पैसा बुझाउनु भने। उनी दुःखी हँुदै घर फर्किइन्।
अदालतमा मुद्दा हालेर अनुरुदले सञ्जिलाका आफन्त मीनादेवी मण्डलको ४ कट्ठा र जिबच्छी धानुकको ११ कट्ठा जमिन रोक्का गराएका छन्। आफन्तले पनि ऋण तिरेर चाँडै फुकुवा गराउन दबाब दिएपछि उनी झनै तनावमा छिन्। अनुरुदको ठगीले सञ्जिला मात्र होइन, उनीजस्ता कैयौं गरिब कंगाल बनिसकेका छन्। ती निरक्षर गरिबलाई थोरै कर्जा दिई धेरैको कपाली कागज बनाएर सहीछाप गराउँछन्। पछि त्यही कागजलाई हतियार बनाएर अदालतमा मुद्दा हाल्ने र गरिबको उठिबास लगाउने उनको धन्दा बनिसकेको छ।